Imibukiso Engcono Kakhulu ye-Anime ku-Netflix - Kumele Ubuke - Ezokuzijabulisa
Imibukiso yama-Anime yichungechunge lwama-animated aseJapan olwenziwe imibukiso ye-TV. Njengoba iNetflix isiqalile ukukhombisa imibukiso eminingi ethandwayo yama-anime, umkhuba ne-hype kuyenyuka kuya phezulu. Abantu baphendukela ku-anime ngesisekelo esikhulu. Futhi lokho kuyiqiniso futhi. Ngiqonde ngazo zonke izindaba ezimnandi, abalingiswa be-surreal, izithombe ezimangalisayo, imilayezo ekhuthazayo, izigcawu zokulwa nezinzipho, nezindaba zothando ezithandekayo, obengeke athande lokho? Siphathe eminye imibukiso emihle kakhulu ye-anime etholakala kuNetflix engakujabulisa noma kunini lapho ufuna khona.
Ama-Anime afana namaphupho nemicabango yethu alethwa phambi kwethu njengokuqagela. Ama-projection, okuyinto uchungechunge lwempilo yangempela ebelungakaze lusinikeze, hhayi ngalokhu kuhluka okungenani.
Kepha linda, njengoba sishilo nje ukuthi kunenqwaba yochungechunge lwama-anime kuNetflix manje, okusho ukudideka okuningi ekutholeni okungcono kakhulu kuwe. Futhi ngubani owaziyo ukuthi ungagcina ubukele ukuzitika ngokweqile ngeziqephu eziyi-8-10 zochungechunge olwembula kamuva ukuthi alulona udaba lwendaba oluthandekayo.
Nethezeka! Sikuhlelele konke lokhu. Nalu uhlu lwemibukiso engama-24 ehamba phambili ye-anime engadumile kuphela kodwa enengqikithi enhle futhi. Ngakho-ke funda futhi ubuyekeze uhlu lwakho lokubuka manje.
Ufuna ukubuka imibukiso yama-Anime? Hlola Izindawo ezihamba phambili ze-Anime kusuka esigabeni sethu sebhulogi.
Imibukiso Engcono Kakhulu ye-Anime ku-Netflix:
Njengoba yakhululwa ngo-2007, lolu chungechunge luyindaba yomfana oyintandane ogama lakhe linguNaruto Uzumaki. Emashumini eminyaka adlule kwaba nokulwa okufayo nempungushe enemisila eyisishiyagalolunye eyahlasela lo muzi futhi ininja yanikela ngempilo yayo futhi yabopha impungushe emzimbeni kaNaruto lapho isewusana. Futhi manje isifiso sempilo kaNaruto kuphela ukuba abe nguHokage (umholi wesigodi sakubo, iHidden Leaf Village).
Ezinye zezingxoxo ezifana'Kuze kube ngiba yiHokage, noma ngabe kwenzekani, angizukufa ”, kukhombisa ukuthi uNaruto wayezimisele futhi egxile kangakanani futhi wakugqugquzela kanjani nawe ochungechungeni lwemicimbi yempilo.Uchungechunge lugcwele ukulandelana kwezenzo, amahlaya futhi, ngakho-ke, lungomunye wabathandwa kakhulu. INetflix inezinkathi zayo ezi-5 kuphela, ngasinye sineziqephu ezi-4.
Isilinganiso se-IMDB-8.3 / 10
Umfana omncane ogama lakhe linguGon Freecss uthola ukuthi ubaba wakhe umshiye waba ngumzingeli futhi usaphila. Ngakho-ke naye uzibeka emkhankasweni wokuba ngumzingeli okumele aphumelele isivivinyo sabazingeli. Le nto 'yokuhlola abazingeli' ifana nomsebenzi wokuzibulala futhi igcwele konke ukuthakazelisa nokuzidela owake wafuna ukukubona.
Kubuye futhi kufanele kubukwe bonke abantu ababuka i-anime yalezi zinsuku ze-surreal neziluma izipikili.INetflix inezinkathi zayo ezingama-4 njengamanje kanti isizini yesi-5 izokhishwa ngoMashi 2021.
Isilinganiso se-IMDB -8.6 / 10
3. Inothi Lokufa
Ngelinye ilanga umfundi wasesikoleni esiphakeme ogama lakhe linguYagami uthola incwadi yokubhala ibhalwe ukuthi 'inothi lokufa'. Manje leyo notebook inamandla okuthi noma ngubani igama lakhe lizobhalwa encwadini yokubhalela, uzofa kungakapheli imizuzwana engama-40. NGOBANI! Yebo, besifana.
Lolu chungechunge lunenzuzo yokuba nesakhiwo esihle kakhulu nokugqwayiza okuhle. Lapho sisamangele khona ngeqiniso laleyo notebook, uYagami unquma ukusebenzisa leyo notebook ukuhlanza umhlaba ebubini.Indaba yezindaba enokwazisa enomlayezo.Yebo, i-DEATH NOTE ikhishwe ngo-2006 kanti iNetflix njengamanje inesizini eyodwa equkethe iziqephu zayo ezingama-37, esicabanga ukuthi zanele isikhathi sokubuka kakhulu.
Isilinganiso se-IMDB -9/10
Ungumlandeli wezemidlalo (i-volleyball icaciswe) nomthandi we-anime futhi?Ngemuva kwalokho i-HAIKYU iyindlela enhle ongayikhetha ngayo. Indaba izungeze uHinata ofuna ukuba ngumdlali we-volleyball ongcono kakhulu ngokuba nekhono kuwo wonke amakhono kumqeqeshi wakhe.
Egcwele umdlandla, amandla, amandla, ukuzimisela, nokuvelela, uHaikyu ukunika inkokhelo enhle ngaphakathi kwezinkathi ezi-3 ezitholakala kuNetflix, nangesizini yesine isendleleni nayo.
Isilinganiso se-IMDB -9.2 / 10
5. INDODA YESIBAYA SESIBILI
Ngabe nawe wawungumlandeli wawo wonke lawo ma-movie amangalisayo aseMelika? Bese i-anime yaseJapan nayo inokuthile ngawe. I-'One-Punch Man ', kuphela ukuthi leli qhawe (Saitama) linamandla nje amancane kunalokho okungenzeka ubukucabanga. Angakwazi ukuqeda ama-villain nge-super punch eyodwa nje. Yebo, amandla amaningi lawo.
Inazo zonke izigcawu zokulwa ezihlukile futhi isekelwa amahlaya anele ukumboza isiqiniseko sokumamatheka kwakho.Futhi, kuyindlela ejwayelekile ye-shounen parody. Izindaba ezimnandi zabalandeli be-shounen impela!
Isilinganiso se-IMDB -9.5 / 10
6. ISAZISI SOKUPHAKATHI KWAMAKHAYA: UBUZALWANE
Uchungechunge oluqukethe ukusonteka okuhlaba umxhwele, izigcawu ezigcina zigcwele amahlaya, udaba lwendaba oluhle kakhulu, izimfihlo ezimnyama, nokugqwayiza okukhulu yilokho okudingayo njengamanje.Indaba yabafowethu ababili, u-Edward Elric no-Alphonse Elric abazama ukunikela ngokuphila komama babo abangasekho ngosizo lwama-alchemy angavumelekile babhekene nochungechunge lwezehlakalo, babhekana nezimfihlo ezimnyama zezwe labo futhi babekezelele ukulimala komzimba.
Abalingiswa bayathandeka futhi njengoba sitshele le ndaba ayinakulinganiswa. Njengoba iNetflix ikunikeza izinkathi ezi-5, nakanjani uzobekela eceleni le mpelasonto ye-FULLMETAL ALCHEMIST: UBUZALWANE.
Isilinganiso se-IMDB -9.1 / 10
7. IZONO EZIMBILI EZIFILE
Izono eziyisikhombisa ezibulalayo ziyiqembu lama-knights ayi-7 empeleni eziyizigebengu eziyi-7 ezomele igazi ezenze izono eziningi impela. Leli qembu liholwa nguMliodas futhi ngesicelo sika-Elizabeth, inkosazana yenkosazana, iqembu lithatha umthwalo wokusindisa umbuso wezingonyama.
Ukumangalela ukulandelana kwezenzo eziningi njengoba igama liphakamisa, kunjalo, inedrama eningi ye-anime, imizwa, nezikhathi zokukhala.Uvala izinkathi ezine zamanje futhi iNetflix izokunikeza isizini yesi-5 ngoMeyi 2021 impela.
Isilinganiso se-IMDB -8.1 / 10
8. UKUVIKELWA KWEBIZARRE KUKAJoJo
Lolu chungechunge lwasakazwa emuva ngo-2012 futhi kusukela lapho lube neziqephu zalo eziningi. Kususelwa ochungechungeni lwe- 'shonen' jump kanti iNetflix ikunikeza iqoqo elihle lezinkathi ezi-3 ezineziqephu ezithile ezingama-26 kusikhathi ngasinye ngokwesilinganiso sazo.
UJoseph Joestar ungumlingisi ophambili futhi uchungechunge lunephakheji yesenzo se-anime yakudala, konke esikufunayo, okukhombisa izimpilo zikaJoJo, izimpi zakhe zamandla omlingo, kanye nomvuthwandaba othile wegazi. Yindaba elula, ayinadrama eningi kepha ezinye ziyaphambuka. Zonke izinto ezihlanganisiwe zenza kube iwashi elihle, elihle.
Isilinganiso se-IMDB -8.4 / 10
9. IMPILO YENhlekelele yeSAIKI K.
USaiki K., umlingiswa ophambili wale ndaba ngumfana osemusha ofuna ukuhlala impilo yakhe ngokuthula kepha unamandla amakhulu emimoya. Ungalawula umlilo, alungise izinto, aphule izinto, afunde izingqondo, njll. Akayona iqhawe lakho elijwayelekile, kunalokho uyisethuli esinamandla angaphezu kwawomuntu, njengoba izinkulungwane zeminyaka zizobiza kanjalo.
Lolu chungechunge lwasakazwa kuNetflix ngasekupheleni konyaka we-2019 njenge-THE DISASTROUS LIFE KASAIKI K. LIVUSILE. INetflix inezinkathi ezintathu zochungechunge lokuqala kanye nenkathi engu-1 yochungechunge oluvuselelwe. Kupakishwe izinhlamvu ezithandekayo, ezinhle, nezihlekisayo, amahlaya amahle, ukuhlela ama-sci-fi, ukugqwayiza okuthuthukile lolu chungechunge futhi ludinga isikhundla esihle kuhlu lwakho lokubuka.
Isilinganiso se-IMDB -8.3 / 10
10. ISIQEPHU ESISODWA
I-Dragon Ball Z ingenye yochungechunge lwe-anime oludala kunazo zonke esasingake silubuke ebuntwaneni bethu. Angithi? Kanjalo ne-'One Piece 'ekhishwe ngo-1999 futhi ivela kuma-studios e-Dragon Ball Z.
I-protagonist, uMonkey D., yipirate futhi ifuna ukuba yiKing of piracy. Futhi ngalokhu, kuzofanele athole ingcebo efihliwe. Yebo, usola okulungile, kuzoba khona ukufuna okusha nokujabulisayo okuzokunikeza ukulandelana okwanele kokuqina.Njengamanje, kunezinkathi ezingama-23 kanye neziqephu ezingama-741 sezizonke ku-Japanese Netflix. Manje lokho kumnandi kakhulu ukubukwa.
Isilinganiso se-IMDB -8.7 / 10
11. I-NEON GENESIS IVANGELI
Ngabe ufisa uchungechunge oluthile lwe-sci-fi, irobhothi, olugcwele ukusebenza? Sizwe ngawe. INeon Genesis Evangelion yindaba lapho i-NERV inamarobhothi amakhulu abizwa ngokuthi ama-Evangelions futhi kufanele alwe nezingelosi ezithile ezimbi.
Ezingxenyeni ezingama-26 zeNeon Genesis Evangelion, azikho nje izikhathi ezithokozisayo nezikulumayo kodwa futhi kunomdlalo omningi wokwenza amehlo akho akhale ngezinye izikhathi. Ukungabaza okuqhubekayo kuzokukwenza unamathele kuze kube sekupheleni.
Isilinganiso se-IMDB -8.5 / 10
UMadoka uyibhungu elihle futhi elijwayelekile elineminyaka engu-14, ophila impilo yakhe ngokuthula nomngani wakhe omkhulu, uSayaka Miki lapho ngelinye ilanga isidalwa esifana nekati sisondela kubo futhi sithembisa ukufeza isifiso sabo esisodwa kodwa ngentengo yokuthi bobabili bazophenduka amantombazane omlingo.
Lokhu kubukeka kuyindaba emnandi, emnandi kepha kugcwele idrama, ubumnyama nezinye izehlakalo ezibucayi. Uchungechunge lunikeza umyalezo wobungani, ithemba, nokuthi amaphupho onke adinga kanjani ukuthi inani likhokhwe.
13. UKUKHANJISWA KWADIVILILI
Olunye uchungechunge lwesenzo se-anime esivusa amadlingozi? Yebo, yilokho i-anime okumelwe ibe ngakho kodwa lena ixhumeke kakhulu ezimpilweni zethu zangempela. Yindlela umfana ogama lakhe lingu-Akira aphenduka ngayo usathane, idimoni okufanele alwe nobubi bomhlaba nobakhe uqobo kepha ngaphandle kwakho konke lokhu kusaphethe inhliziyo yomuntu ngakho-ke kuthwala imizwa.
Kugcwele amandla, ukuchitheka kwegazi okunamandla, nokuthakazelisa, kukhombisa ukuthi umzimba kaSathane usengakhala kanjani. Inquma kuzo zonke izinkambiso zezinzalamizi zabafana ezinamandla.Iqukethe nokuhlelwa okuningi okususelwa kuzidakamizwa okwenza kube uchungechunge lwe-anime lwabantu abadala.
Isilinganiso se-IMDB -7.6 / 10
14. BULALA LA BULALE
UKill la Kill uletha uhlobo olusha lwendaba. URyuki usemkhankasweni wakhe wokufuna umbulali kababa wakhe futhi endleleni uhlangana noSatsuki oyindlalifa yombuso kanina wezemfashini kanye nomongameli womkhandlu wesikhungo semfundo ephakeme, naye onemifaniswano ethile enamandla ebizwa ngeGoku Uniforms.
Ngenkathi icebo lisha, indaba ihlanzekile, abalingiswa banobudlova, nemicimbi iyabulala, inamandla, iyahlekisa, futhi ivusa inkanuko, kuyindaba entsha enhle yokuthwebula.
Isilinganiso se-IMDB -7.9 / 10
Kulungile ukuphumula kusuka kulo lonke uchungechunge lokulwa olulandelayo, ngokulandelayo kwipayipi esinalo uchungechunge olungokoqobo, oluhle, oluthandekayo nolomculo.URetsuko uneminyaka engama-25 yepanda elibomvu elisebenza enkampanini yokuhweba njenge-accountant futhi lowo msebenzi ngempela ungumsebenzi odonsa umphefumulo, okhandlayo, ofana nokufa. Indawo yokusebenza ejwayelekile nomphathi ememeza, ubuchopho buqhuma, nomzimba okhungathekile. Ingabe lokhu akufani nendaba yethu futhi? Siyakuzwa ukukhathazeka kwakho!
Kodwa unezindlela zakhe zokukhipha ulaka, ucula endaweni yokucima ukoma ebusuku ebizwa nge ‘Heavy Metal’.Lokhu kufana nochungechunge OLUPHELELE lokuqaqa usuku lwakho. Akukho ukucindezeleka, akukho drama, ukukhanya okulula, ukuzijabulisa, amahlaya, nsuku zonke njengodaba lwendaba, olunabalingiswa abangenakubekezeleleka.
Isilinganiso se-IMDB -8/10
Indaba yabazalwane ababili, uSimon noKamina. USimon, engumfana onamahloni ophansi, noKamina, umuntu wasendle okhululekile. Bobabili bahlala emzaneni ongaphansi komhlaba, futhi bake bathola uhlobo oluthile lwezinto zomlando zokubaluleka okuthile, futhi bazitika ngempi ethile.
Hhayi, ngeke sikunikeze noma yiziphi izonakalisi.Isakhiwo esisha, esijabulisayo, esinamandla, esinolaka, futhi kwesinye isikhathi esihlekisayo. Ukuba neziqephu ezingama-27, futhi ukuba nochungechunge oluncane ngokuqinisekile kungaba ohlwini lwakho lokubuka.
Sonke sibonile ukuthi amakolishi angokoqobo ahluke kanjani kulawo angempela. Kepha iHyakkaou Private Academy iyisikhungo semfundo esihluke kakhulu obungasibona.Iphethwe yizinyunyana zabafundi, umdlalo kuphela ukugembula, abafundi babalwa ngokwendlela abasebenza ngayo ngokugembula futhi uma umuntu engafuni ukuyidlala bazomane baxoshwe.I-plotline engajwayelekile iyona eyenza lezi zingcweti ezi-2 ezinomlando we-anime zithandwe kakhulu.
Isilinganiso se-IMDB -7.2 / 10
Ngabe lolu chungechunge ludinga incazelo? Empeleni, sonke, okungenani okungenani ama-90% ethu, sikubonile lokhu sonke isikhathi sobuntwana. UPikachu, ukuba yi-pokemon yokuqala ka-Ash nomngane othandekayo nomngane omkhulu uhambisana no-Ash kulo lonke uhambo lwakhe.
Uhambo olugcwele ukubamba amaPokemoni ayinqaba futhi angavamile kodwa anamandla ngePokeballs yakhe nePokeWars okwenza onqobayo abekwe ngaphezu komkhulu.Ukulandelana okungasindi, amahlaya, nezenzo yilokho okwenza uchungechunge lwePokemon luthandwe kakhulu namanje.
Isilinganiso se-IMDB -7.5 / 10
19. I-ACADEMIA ENGENZENYANGA
Siyazi ukuthi ngokuzwa ngesikole sabathakathi, nonke niyakhunjuzwa ngoHarry Potter noHogwarts noDumbledore. Kodwa lokhu kwehlukile, okokuqala lokhu kuyi-anime, okwesibili, yindaba yentombazane egama lingu-Akko evela endaweni engeyona imilingo ngakho-ke kufanele asebenze kanzima, kanzima kakhulu ukwenza iziphonso zakhe nemilingo.
Lolu uchungechunge olunezinhliziyo ezilula futhi oluhlekisayo ongalubuka. Ngawo wonke amahlaya, u-Akko usebenzisa isipelingi ngokungafanele ngaso sonke isikhathi futhi eguqula abangani bakhe babe yizinto ezingaxakile, abalingiswa abathandekayo, nesisekelo esihlekisayo, nakanjani kufanele ubukele.Futhi, zombili izinkathi zezifundo zewashi elincane zikuNetflix.
20. AMANGA WAKHO NGO-APRIL
Le ndaba yasakazwa emuva ngo-2016 futhi kusukela ngaleso sikhathi kwaba uchungechunge lwe-anime oludumile.Kuyindaba enhle yothando phakathi kukaKousei Arima noKaori Miyazono. UKousei uyena ophambili futhi ungumshayi wopiyano. Uyabhidliza lapho kushona unina futhi ulahlekelwa yikhono lakhe lokuzwa amanothi omculo. Ucishe awuyeke umculo lapho uKaori, oyishayoli, engena empilweni yakhe. Uyamthatha, amgqugquzele, amakhe futhi, futhi amnikeze isiqalo esisha.
Le yindaba emsulwa, ethandekayo, nehehayo ukuthi nakanjani uzozizwa uthandwa futhi umomotheka emva kwayo. Njengoba isakhiwo sinezimo ezithile ezingokomzwelo, ngakho-ke thola izicubu zakho.
21. IJAPANI LIYACABANGA
Le isuselwa kunoveli edumile eyabhalwa nguSakyo Komatsu, eyashicilelwa ngo-1973. Yincwadi yenhlekelele. Lolu chungechunge lukhombisa impilo yomndeni ojwayelekile owenza izinguquko ezejwayelekile lapho ngokungazelelwe iJapan ihlaselwa uchungechunge lwezinhlekelele zemvelo.
Futhi lo mndeni kufanele ulwe nakho konke, hhayi ukuthola amandla noma inhlonipho noma isifiso, kepha ukuze uhlale uphila futhi lokhu kuliwa nemvelo kamama.Ibonisa ukuthi impilo iphihlika kanjani lapho kwenzeka inhlekelele eyodwa nokuthi izinto zingaqhekeka kangakanani uma ngabe bekukhona uchungechunge lwazo.
Yindaba yethemba, ukulwa, ukuzimisela, uthando lomndeni, amandla, ulaka, nokulwa ukuze uphile.Ngempela iwashi elihle lapho esivele sihlushwa okuningi. Kusinika amandla amakhulu kakhulu okulwa nanoma yiziphi izinhlekelele zanoma yiluphi uhlobo.
Isilinganiso se-IMDB -6.5 / 10
UViolet yintombazane eyake yaba yisosha lengane. Futhi leyo mpi yamlahlekisela izingalo zakhe nokukhula kwakhe ngokomzwelo esemncane. Futhi manje ukhetha ukubhala njengokudlula kwakhe ezibandezelweni zakhe ezingapheli ezingokomzwelo.Ukubuka lolu chungechunge ukuhamba ngesitimela esihehayo. Isitimela esinamandla anele okukwenza ukhale ngezikhathi ezithile.
23. UKUHLASELWA KWETITAN
Amadolobha abantu abhujiswa ngamunye ngamunye ngabantu abakhulu okuthiwa yiTitans. Ngakho-ke elinye lamadolobha lakha izindonga ezinkulu zokumisa ama-Titans. Kodwa ngenxa yokusizakala ngosayizi wazo, ziyabhidliza izindonga futhi zichitha umuzi.Bese kuthi izingane ezimbili zisinde ngandlela thile. Kepha ukubona abathandekayo babo befa phambi kwabo, kubhebhethekisa umlilo wokuziphindiselela kubo.
Lapho uzobona lezo zingane zilwa nalezo zidlakela, emva kokuba izingane sezikhulile, nawe uzogcwala imizwa eminingi. Nawe uzokuzwa kulula ukuziphindiselela, ukulwa nokucekela phansi amaTitans ngoba lawo ngamandla alolu chungechunge.
Izokumunca kuyo futhi ikwenze unamathele ekugcineni kochungechunge.Ingasaphathwa eyomculo, okuwumlutha nje!Ingenye yochungechunge oluthandwa kakhulu.
Isilinganiso se-IMDB -9.7 / 10
Izungeze uBaki Hanma, iqhawe lomhlaba lobuciko bempi elingaphansi komhlaba. Ufuna ukunqoba uyise futhi abe umuntu onamandla kunabo bonke emhlabeni. Kepha-ke uyazi ukuthi kufanele abhekane neziboshwa ezi-5 ezeqe ekubulaweni.
Lokhu ngeke kube uchungechunge lwezenzo ezejwayelekile kepha njengoba kuhilela ifa laseJapan, ubuciko bempi, kuzoba isandla esihlukile ukulwa nesigcawu samandla esigcwele amandla.Ukubona amandla namandla anjalo, uzomangala futhi umangale. Impi yezobuciko ebekwe ngaphandle kwemithetho iyinjabulo kubalandeli bezehlakalo zokulwa.
Njengoba iNetflix inezinkathi ezi-3 neziqephu ezingama-39 sezizonke, kuwuhlelo oluhle lokuzitika ngocansi ngempelasonto yakho.
Isilinganiso se-IMDB -7.7 / 10
Ngemuva kokusebenza kanzima kulo lonke isonto ufanele ukuthola izikhathi ezithile zokubuka kakhulu. Futhi ngochungechunge lwe-anime njengamanje oluhamba phambili kakhulu, sikubekele uhlu oluhle kakhulu oluhlanganisa cishe zonke izinhlobo zochungechunge lwe-anime.Kusuka ezenzweni nasekulweni izigcawu kuya ezindabeni ezinhle zothando, kusuka kutimu yethu yansuku zonke kuze kube khona uhlaka olungezwanga.
Noma uzizwa uhlakaniphile noma unamandla noma uthandana noma u-meh nje, sibhale konke ongakudinga ukukwenza kulunge.Manje thola umduduzi wakho, ukudla okulula okuthandayo, cisha amalambu, bese ungene nje ngaphakathi.
KissAnime.ru Ezinye izindlela
Imibukiso emihle kakhulu ye-Anime ku-Hulu